Breaking – रोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा हुने मिति तोकियो ! – AB Sansar
October 14, 2020 adminLeaveaComment on Breaking – रोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा हुने मिति तोकियो !
Breaking – रोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा हुने मिति तोकियो ! काठमाडौं–राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा छठलगत्तै हुने जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले मन्त्रिपरिषदले परीक्षा लिने बाटो खुलाइदिएकाले छठलगत्तै परीक्षा हुने बताए। ‘मन्त्रिपरिषदले परीक्षा लिने बाटो खुलाइदिएका छ,’ पौडेलले भने, ‘छठलगत्तै परीक्षा लिनेगरी तयारी थालेका छौँ ।’ *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
April 10, 2021 santosh